अस्ट्रेलीया आउँदा दशहजार नपत्याउनेलाईआईफोन र एमकेको झोला – || koselinews.com ||
अस्ट्रेलीया आउँदा दशहजार नपत्याउनेलाईआईफोन र एमकेको झोला
डकुमेन्ट बनाउन आटेको दिदी अलिकती पैसानै पुगेन । छ भने दिनुहोस् न सापटी । गएपछि पठाई दिई हाल्छु नी । दिदी भन्दै थिईन्, ह्या भाई केही दिन अघि मात्र सुन जोडे नि । अलिकती अगाडी भन्नु पर्दैन । थियो नि दुई लाख जति । दिई हाल्थे नि भाईलाई एक दुईलाख ।
अङ्कल अस्ट्रेलीया पो जाने बिचार गरियो तर हेर्नुहोस् न केही रकम अपुग होला जस्तो छ । यसो मिलाई दिनु हुन्छ कि भनेर । उताबाट जतिसक्दो चाँडो पठाई दिई हाल्छु नि । ल बाबु कस्तो बेला पैसा माग्यौ । पैसा नभएको होईन थियो । हिजै मात्र अलि कति शेयरमा लगानी गरेनी । नत्र त जाबो एकदुई लाख दिन बाबुलाई कुनै आपत्तीनै थिएन ।
पल्लो गाउँकि भाउजुलाई हान्नीएर भेट्न गए । भाउजु भिसा त लाग्यो । यसो सपिङ र टिकटको लागि पैसा पुगेन । तपाईले राख्या होलान्, एकदुई लाख । ल्याउनु न हौ । तपाईका लालाबाला पनि छन् । कुनै दिन काम लाग्दो हुँ नी । के सन्दुकमा कुहाएर राख्नु हुन्छ हौ पैसा । बरु व्याजमा दिने भए व्याजै सहि । कति लिनु हुन्छ सयकडा ? बरु दिन्छु हो । त्यस्तै परेर पो माग्न आएको भाउजु सम्झेर । ओ हो नानी नभाको त होईन । पैसो त थिएन कि हाक्की कुरो गर्दा सुन चाँही थियो । अस्ती भर्खर कतार जान्छु भनेर पारी माईलो आएको थियो, उसैलाई दिएँ नि । डबल दिन्छु भनेको छ । कस्तो ट्याममा माग्न आउनु भयो । एकदुई हजारले चल्दैन होला ।
हार गुहार गर्दा कसैले पत्ताएनन् । सबैले बेजोडका बहाना बनाए । आश देखाए सार्है मिठा अनि गुलीया तर अहँ पैसोमा पत्ताएनन् । सर्पको आहारा दैवले पुर्याउँछ भनेझै अन्तमा एकजना दाई भेटीए । एकबातमा पैसा दिए अनि भन्दै थिए बहिनी छ पछि तैले त्यसलाई हेर्नु । परदेश भनेको दुख गर्ने ठाउँ हो । दुख गर्नु मेहेनेत गर्नु बेला बेला सम्झनु ।
हवाई जहाज चड्ने बेला फोन गरे सबैले जोसँग पैसा मागियो । सबैले आशीर्बाद दिए अनि सहयोग गर्न पाएनौ भन्दै सहानुभुती दिदै थिए । आफुलाई बोडीङ् पास र सामानहरु जोख्नमा तनाब थियो ।
आईयो, पढियो दुख गरियो । एकातीर डिग्री सकियो । अर्कातिर केही डलर कमाईयो पनि । सबैसँग लिएको ऋण क्रमैसँग तिरीयो । साउदी कतार अनि दुबई जस्तो बर्षेनी कम्पनीले बिदा दिए जस्तो नहुने यता । उता नबुझ्ने । होईन तेरो छुट्टी मिल्दैन । कहिले आउँछस् हौ । कतार गाका त बर्सेनी आउँछन् त । के गरेर बसेको छस् हौ । के थाहा यता कलेज, काम, परिक्षासबै मिलाउन कति गार्हो हुन्छ भनेर । होईन तेरो छोरो त उतै बिहे गरेर बसो कि क्या हो । गाउँमा कुरो यस्तै त हो नि ।
धेरै समयको प्रतीक्षा पछि पढाई सकेर, कामबाट छुट्टी मिलाएर नेपाल जाने निर्णय भयो । घरमा भने आमा म आउँदैछु । मन मिल्ने साथीलाई भने । एक्कान दुईकान मैदान । त्यस बिचमा नेपालमा धेरै परिबर्तन भए । सञ्चारले फड्को मार्यो । धेरैका घरमा कोही न कोही परदेश जाने आउने भए । सामाजिक सन्जालहरु फेसबुक एकाउन्ट गाउँकी हजुरआमाको पनि हुन थाल्यो । काकी नि अनलाईन आउन थालिन् । अङ्कल पनि अफलाईन म्यासेज पठाउन थाले । साथीहरु भिडीयो च्याट गर्ने भए । पल्लो गाउँकी भाउजु पनि म्यासेन्जरमा कुरा गर्न थालीन् । बर्षौसम्म बेवास्ता गर्नेहरु, आमालाई बाबुको खबर के छ सम्म नभन्नेहरु त्यहाँको चकलेट मिठो छ ल्याउ भन्नु है छोरालाई भन्न थाले रे । कसैलाई आईफोन ल्याई दिन पर्यो रे । कसैलाई ब्रान्डेड झोला चाहियो रे । कसैलाई नोट बुक अनि कसैलाई पिएस फोर । कोहीलाई स्वीसको घडी अनि कोहीलाई फिस वयल रे ।
आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ती तैले पठाई दिएको त्यो नङ पालीस र लिप्स्टीकपनि सस्तो र महङ्गो भन्दै खासखास खुसखुस गर्दै थिए । रङ् हेरेर थाहा पाउँछन् हौ आजकाल सक्कली र नक्कली । यतिका बर्ष के छ हाल खबर भनेर नसोध्नेहरु अहिले बाबुको टिकट कहिले भन्दै सोधेर हैरान पारी सके ।
अनि भन्न मन लाग्छ धनको मुख रातो । तेरा घरका रंग रंग, उ बेला दस हजार दाममा मुख रातो बनाउनेहरु तिमीहरुलाई चाहियो है आईफोन अनि माईकल क्लर्कको झोला । बल्ल त पैसो फल्ने बिउँ छरियो अब फलेपछि ल्याई दिउँला आईफोन १६ र ब्रान्डेड झोला अनि स्वीसका घडी कि कसो !
नोटः कसैको बास्तबीकतासँग मेल खान गएमा केबल संयोगको रुपमा लिएर कसैलाई साँच्चै सहयोगको खाँचो छ भने सकेको सहयोग गर्ने परिपाटीको बिकास गर्नु होला । इनेपाल डटकमबाट